Mushure mekutengesa sevhisi & Nyaya - Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd.
Govera uchishandisa kuraira uye nhungamiro.
1 Gore garandi nguva. Mushure mekunge zvinhu zvagamuchirwa, mutengi anogona kutibata nesu mushure mekutengesa sevhisi kana paine dambudziko.
Kana zvigadzirwa zvikasimbiswa mushure mekugamuchirwa, asi zvine dambudziko rekushivirira panguva yekushandisa, isu tinokwanisa zvakare kupa mahara calibration, mutengi anofanira kubhadhara mari yekuendesa.
Nekuda kwehunhu hwehuremu, chete kirasi F2 / M1 kana pazasi inogona kuve mavirind akaenzana.
Mutengi wedu akanaka uyo akatenga anti-slip countertop truck scale uye anotitumira mifananidzo yake nezvinhu zvedu. Kutenda nekuvimba kwake uye nemutsa mhinduro.
* Calibration zviyereso zvehunyoro mita
Meter yemvura inoshandiswa zvakanyanya murabhoritari kana muitiro wekugadzira unofanirwa kuyera hunyoro nekukurumidza. Zvakadai seindasitiri yemishonga, chikafu indasitiri, indasitiri yemakemikari, kurima nezvimwe.
Maitiro ekudzikamisa iyo mwando mita nehuremu?
Ramba uchidzvanya ZERO bhatani panguva yenyika ye0.00g.
Kana iyo skrini ichipenya, isa 100g uremu pane yekuenzanisira tireyi zvinyoro nyoro. Iko kukosha kuchapenya nekukurumidza, uye mirira kusvikira iyo readout yamira pa100.00.
Bvisa huremu, dzokera kuyedzo modhi, maitiro ekugadzirisa anoitwa.
Iyo nyowani nyoro mita inofanirwa kuyerwa isati yashandiswa. Kana ichishandiswa kazhinji, saka inodawo kuverengerwa kazhinji. Kusarudza zviyereso zvakafanira zvinoenderana nemamita emumvura ekuyera kwakakosha. Wana mazano pano.
* Kuyera zviyero zvemakero emagetsi
Kazhinji, zviyero zvemagetsi zvinofanirwa kuverengerwa ne 1/2 kana 1/3 yeiyo yakazara chiyero renji. Iyo standard calibration maitiro iri pazasi:
Vhura zviyero, kudziya kwemaminitsi gumi nemashanu, uye calibrate 0 bit. Wobva washandisa zviyereso kuenzanisa zvakateedzana, senge 1kg / 2kg / 3kg / 4kg / 5kg, chengeta kuverenga kuve kwakaenzana kurema kwezviyero, maitiro ekugadzirisa anoitwa.
Zviyero zvakasiyana zvinoda kirasi dzakasiyana yezviyereso:
Balance ne 1/100000 shiviriro uye hushoma chiyero 0.01mg ndeye kugona chikamu chiyero. Iyo inofanirwa kuverengerwa neE1 kana E2 zviremu.
Kuenzanisa ne1 / 10000 kushivirira uye zvishoma chiyero 0.1mg inoshandisa E2 zviyero kuyera.
Kuenzanisa ne1 / 1000 kushivirira uye zvishoma zviyero 1mg inoshandisa E2 kana F1 zviyero kuyera.
Kuenzanisa ne1 / 100 kushivirira uye zvishoma chiyero 0.01g inoshandisa F1 zviyero kuyera.
Chiyero chine 1/100 kushivirira uye zvishoma chiyero 0.1g inoshandisa M1 zviyero kuyera.
Izvo zviyero uye zviyero zvinogona kuyerwa neinoenderana kukosha uye zviyero zvekirasi.
* Elevator kurodha bvunzo
Iyo yakajairika nzira yekukwirisa bvunzo. Iyo yekuyera factor bvunzo yeiyo erevheta inodawo kushandisa masimbi. Chiyero chinosimudza erevheta ndeimwe yemamwe maparameter akakosha erevheta yekusimudza, uye paramende yakakosha yekuchengeteka, kuvimbika, kugadzikana uye simba-rinoshanda rerevheta. Sechinhu chakakosha basa, iyo bvunzo yechikwiriso chinhu inosanganisirwa muchirongwa chekugashira kuongorora. 20kg yakakanda simbi masimbi "matombo akaremara" (M1 OIML zviyero zvakaenzana) ne1g shiviriro inoshandiswa pakuongorora kweelevheta. Kazhinji, makambani erevheta anozoshongedza nemadiki esimbi esimbi kubva pa1 tani kusvika kumatani akati wandei.
Iyo yakakosha michina yekuongorora Institute inodawo kushandisa yakakanda simbi simbi kune iyo erevheta kurodha kuongorora. Saizi yakajairika ndeiyi: 20KG yakakanda simbi simbi (inokodzera nyore, nyore kusimudza), uye chechipiri mamwe mauniti ekuongorora achasarudza 25kg yakakanda simbi mhando.
* Kuenzanisa kwebasa rinorema weightbridge / zviyero zvemarori
* Maitiro Ekugadzirisa
Kuenzanisa pamakona: Sarudza huremu mu1 / 3X kukosha (X pachinzvimbo chehuremu hwesimba), chiise pamakona mana epuratifomu uye uremu zvakasiyana. Kuverengerwa kwemakona mana hakugone kunze kwekutendeseka kushivirira.
Linearity calibration: Sarudza zviyero mu20% X uye 60% X, uzviise pakati pehuremu hweparutivi zvakasiyana. Mushure mekufananidza kuverenga nekukosha kwehuremu, kutsauka kwacho hakufanirwe kudarika kushivirira kunotenderwa.
Linear calibration: Sarudza 20% X uye 60% X zviyero, isa huremu hwakaenzana pakati penzvimbo yekuyera chiyero, uremu zvakasiyana, uye kuverenga kunofanirwa kufananidzwa nehuremu hwakaenzana. Iko kutsauka hakufanirwe kudarika iko kunotenderwa kukanganisa.
Ratidza kukosha calibration: Avhareji izere inoyera huremu muzvikamu gumi zvakaenzana, seta yakaenzana kukosha maererano nazvo, isa yakajairwa huremu pakati pehuremu, wobva wanyora kuverenga.
* Kuenzanisa zviyero zvezvipfuyo
Zviyero zvezvipfuyo zvinoshandiswa kuyera zvipfuyo. Kuti uchengetedze huchokwadi hwezviyero, zviyero zvedare zvinogona kushandiswa kuyera zviyero zvezvipfuyo.
* Zviyero zvemarori emapallet
Iyo inosanganisirwa muruoko pallet rori uye zviyero pamwechete. Nechekero remarori pallet, kutakura uye kuyera zvinogona kuitwa panguva imwe chete. Ita yako ye-mumba logistics iwedzere kushanda nemutengo wakaderera.
* Crane zviyero
Zviyero zvecrane zvinoshandiswa kuyera mutoro wakarembera, nehurefu hwakasiyana uye huremu huremu, kupa mhinduro kuchinetso maitiro ekuyera mutoro usingaenzaniswi pasi pemamiriro emaindasitiri Kazhinji inoshandiswa muindasitiri yesimbi, simbi, mafekitori, migodhi, zviteshi zvekutakura zvinhu, zvigadzirwa , kutengeserana, mashopu, nezvimwe, zvakadai sekutakura, kuburitsa, kutakura, metering, kugadzirisa, nezvimwe Maindasitiri anorema-dhiraidhi crane zviyero zvinowanikwa kubva ku100kg kusvika ku50tonne masimba
Scale Kuchengetedza Kurema, Sheuri Beam Load Cell, Kuyera Kurema Set, Certified Weights, Calibration Zviyero zveDhijitari Scales, Kuchengeta Misa,